Keto Guru, effervescent အစားအသောက်များတွင်ဆေးပြားနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ
အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံ Keto Guru
London မှ Keto Guru Kate နှင့်တွေ့ကြုံခံစားပါ
ဟယ်လို။ငါအဝလွန်ခြင်းကိုမည်သို့တိုက်လှန်ခဲ့ပုံနှင့် Keto Guru ဆေးများကကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့ကူညီခဲ့သည်ကိုသင်ပြောပြပါမည်။
ကလေးမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။အစပိုင်းမှာတော့ငါစိတ်မပူခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဟာအမြဲတမ်းကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျသွားတယ်။ဒါပေမယ့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်မအောင်မြင်တဲ့အစာကိုစားရင်တောင်ကီလိုဂရမ်အတော်များများဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်စားတာနဲ့အမျှအလေးချိန်ပြန်လာတယ်
ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုမြန်ဆန်စေရန်ကိုယ်အလေးချိန်မကျမီ၊ ဆေးပြားတလုံးကိုကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ဒါနဲ့အင်တာနက်ပေါ်က keto အစားအစာအကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်။၎င်း၏အနှစ်သာရမှာအစားအစာတွင်အဆီပါဝင်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်ပြီး၊ ဆန့်ကျင်။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ကိုယ်အလေးချိန်ကျတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာဒီအစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာခဲ့ပြီး Keto Guru ကိုအဆီလောင်ကျွမ်းစေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ဒီအချောစားဆေးတွေကို keto အစားအစာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အဆီဟာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာမဟုတ်ဘဲချက်ချင်းလောင်ကျွမ်းသွားတယ်။ဤသည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုချက်ချင်းမြင်နိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းနားလည်ရန်အတွက်တစ်လမျှအစားအသောက်ကိုမသောက်ချင်ပါ။
ငါက ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိဆေးပြားများကိုမှာယူခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘာဝကအဆီလောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းအတွက်ဇီဝဖြည့်စွက်သည့်ကီတိုဂူရူကိုအွန်လိုင်းထုတ်လုပ်သူမှသာဖြန့်ဝေသည်ကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ထို့အပြင်ဆေးဆိုင်များတွင်အတုတစ်ခုသို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်ရန်လွယ်ကူသည်။တနည်းကား, ငါဆေးဆိုင်များ၌သင်တို့ကိုကျိန်းသေလိမ်လည်သူများ၌သင်တို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်အကြောင်း, ငါလုပ်ခဲ့ပုံကိုသင်ရုံပြောပြပါမည်သူမျှမပေးပါ။
အထုပ်လျင်မြန်စွာရောက်ရှိလာသည်, ငါအပြည့်အဝသင်တန်းကိုပြီးမြောက်ရန်တစ်ချိန်ကအများအပြား packages များဝယ်ယူခဲ့သည်။ငါတစ်နေ့ဆေးပြားတစ်လုံးသောက်တယ်။သူတို့ကရေထဲမှာအလွယ်တကူပျော်ဝင်သွားလို့မစားခင်သောက်ခဲ့တယ်။
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတော့ခါးမှာအဆီနည်းလာတယ်ဆိုတာသတိပြုမိခဲ့တယ်။တိုင်းတာသည်အနုတ်4စင်တီမီတာ! မကောင်းတဲ့ရလဒ်မဟုတ်ဘူး။ရလဒ်အနေဖြင့်တစ်လအတွင်းကျွန်ုပ် ၁၅ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။နှင့်အဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး, သင်တန်းပြီးနောက်, အလေးချိန်ပြန်လာမသွား!
Keto Guru ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအောင်အောင်မြင်မြင်မအောင်မြင်ဘဲကြိုးစားခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျအောင်ကြိုးစားနေသူမည်သူမဆိုကိုကျွန်တော်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဓာတ်မကျပါနှင့်၊ ဤကိရိယာဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းသည်သမားရိုးကျအစားအစာများထက် ပို၍ သာယာသည်။မိမိကိုယ်ကိုအစာငတ်။ သုပ်များသာထိုင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ကောင်းပြီ, အားကစားအကြောင်းကိုမေ့လျော့တော်မမူပါနဲ့, အပိုပေါင်တိုက်ခိုက်နေသည့်အခါဤသည်လည်းအရေးကြီးပါသည်!